Fiatoana kely… hitondra fiovana sy fanovana | NewsMada
Fiatoana kely… hitondra fiovana sy fanovana
Par Taratra sur 24/12/2016
Fiatoana kely amin’ny adilahy sy disadisa politika izao fotoan’ny fety izao? Amin’izao ihany koa, tsy ekena ny hoe fahatapatapahan’ny famatsian-jiro. Mba miato kely ny delestazy. Ho hita eo… Toy ny fiatoana kely ho an’ireo miady amin’ny hanoanana sy ny kere isan’andro vaky, raha mba misy manome sakafo amin’izao.
Fiatoana kely mandalo avokoa izany. Hafa izay iainana mandavantaona. Tsy fitoniana politika sy ny tsy fahamarinan-toeran’ny mpitondra. Mbola hisy ihany ny delestazy, tsy foana tao anatin’ny telo volana, telo taona… Tsy afaka ny tsy fanjarian-tsakafo sy kere, fa tsy hita izay tena atao sy politikan’ny fitondrana ny amin’izany.
Hitondra inona eo amin’ny fiainan’ny vahoaka ifotony izay hoe fiatoana kely amin’itsy sy iroa? Na fanarian-dia sy fampandriana adrisa ihany, famalifaliana, fampanginana… Tsy misy fiatoana tsinona ny fahantram-bahoaka ankapobeny, ny tsy fandriampahalemana efa ho lava, ny tsy fisian’ny asa miforona, ny tsy fanjarian-tsakafo…
Anisan’ny fototra sy fositr’izany rehetra izany ny afitsoky ny mpitondra. Sao sanatria fisehoana ho zavatra na hetsika ivelany ihany ity hoe fiatoana kely amin’itsy sy iroa? Na mety ho fandrebirebena, fitaka… Misy ny miato kely maka bahana hanohizany ny ataony hatrany aza, sanatria? Eny, na iza hiteny na iza tsy faly.
Mba hitondra fiovana sy fanovana ao an-tsaina sy ao am-po ho amin’ny tsara ve izao Krismasy izao? Tsy fiatoana kely fa fampiatoana tanteraka amin’ny tsy fanarahan-dalàna efa ho lava, ny kolikoly hoe avo lenta, ny fisian’ny tsimatimanota, ny tsy fangaraharana, ny kiantranoantrano, ny fampihorohoroana, ny jadona…
Mba hitondra fihatsarana amin’ny fomba fiasa izany, hitondra fihatsaram-piainana ho an’ny vahoaka koa. Mirary Krismasy sambatra ho an’ny ny isam-batan’olona, isan-tokantrano… Tsy amintsika va Andriamanitra amin’izao fahatsiarovana ny fahaterahan’i Imanoela ao anatintsika izao? Ho amin’ny fiovana sy fanovana…